Sidee loo noqdaa System Administrator - Hurbad
Sidee loo noqdaa System Administrator
Waxaa dhicin karta maalin maalmaha kamid ah in aad naftaada ku qabatay ayadoo riyooneeysa, kuna riyooneeysa, adiga oo shaqo IT ah ugu shaqeeynaya kampaniyada ugu waaweeyin aduunka. hadii aad dadaasho riyadaasu waa eey rumoobee. maqaalkaan waxaan rabnaa in aad ku kala dhig dhigno sida loo noqdo System Administrator.
Hadaad aqrineeysid maqaalkaan waxeey u badan tahay in aadan ku qanac saneeyin shaqada aad qabato ood dooneeysid in aad shaqo badalatid.
Hadii aad dadaasho ITgu waa shaqooyinka ugu fudud sida lugta loola galo, sababtoo ah waqti yar ayeey kugu qaadanee in aad barato koosooyinka aas aaska u ah, kadibna aad ku hesho baqada bilowga ah ( Service Desk Analyst).
Muxuu sameeyaa Network Administrator ?
Network administrator ka wuxuu ka masuul yahay kambaniga oow ushaqeeynayo Networking kiisa oodhan. shaqada network administrator ka waxaa ka mid ah in oow cilad bixiyo wixii cilad ah oo ku yimaada networking dhan, sidoo kale wuxuu sameeyaa installing iyo configuring computer networks ama systems.
Maxay yihiin xirfadaha aad u baahan tahay si aad u noqotid Network Administrator ?
hadii aad fiiriso Network Administrator ku shaqdiisu waa shaqo u baahan xirfada badan iyo xirfado qaas ah.
Xirfada Qaas ka ah
Koorsooyinka aad qaadan kartid sida aad u noqoto Network Administrator.
koosooyinka waa in aad u barataa sida eey iskugu xigxigaan.